Vaovao - 2 minitra ho anao hahalala haingana ny toetoetran'ny hety biby
2 minitra ho anao hahafantaranao haingana ny toetoetran'ny hety biby
Fanetezana mivantana: mpanao hatsaran-tarehy tena tsara, raha ny marina, ny fanetezana mivantana dia afaka mamita ny asan'ny hatsaran-tarehy rehetra, ny manety mivantana dia fanahin'ny mpanao hatsaran-tarehy, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny misafidy volo-tànana mivantana.
Fanetezana bending: ampiasaina izy io mba hanaingoana ny lohan'ny biby. Ny fampiasana am-pahendrena ny fitongilana dia afaka manatsara ny hafainganam-pandeha haingana kokoa noho ny manety volo mivantana. "Artifact" izy io mba hitsitsiana fotoana rehefa sahirana amin'ny hatsaran-tarehy ny fivarotana biby fiompy.
Hety nify: ampiasaina indrindra amin'ny volo manify, matetika ampiasaina amin'ny fanetezana alika Pomeranian, volomaso Schnauzer, hety nify dia tsy matetika ampiasaina, fa koa hety ilaina ho an'ny hatsaran-tarehy biby.
Hety mahazatra dia 6 santimetatra, 6,5 santimetatra, 7 santimetatra, 7,5 santimetatra, 8 santimetatra, arakaraka ny haben'ny tanany.
Maro ny hatsaran-tarehy no manana olana:
Inona no mahasamihafa ny hety biby fiompy sy ny hety taovolo?
1. Volo iray ihany ny mason-koditra ataon'ny olombelona, ​​fa ny ankamaroan'ny alika dia maniry 3-7 amin'ny volo iray. Raha vantany vao miresaka, ny volo alika dia malefaka kokoa noho ny volon'olombelona, ​​ary ny volo na fibre malemy kokoa no sarotra tapahina noho ny volo sy kofehy matevina kokoa.
2. Mizara roa. Ny volom-borona hety dia ho toy ny hety fisaka ho an'ny olona, ​​satria ny fepetra takiana amin'ny fanapahana biby fiompy dia ho avo kokoa noho ny an'ny olona, ​​ary ho avo kokoa ny marimarina, raha tsy izany dia mahia kokoa noho ny an'ny olona ny volon'ny alika, ary izany dia mora manapaka volo tsy tapaka.
3. Miankina amin'ny asa-tanana izany. Ny haavon'ny hety avo sy ambany dia miankina amin'ny hoe mety ny asa-tanana. Mba hijerena ny asa-tanana, ny iray dia ny hahitana raha milamina sy milamina ny zorony anatiny (izany hoe jiro fotsy eo amin'ny faran'ny antsy, izay ny tsipika fizarana an'ireo sisin'ny antsy roa an'ny hety). Azonao atao ny manokatra ny hety ary manidy azy moramora mba hahatsapa fa malama ny hety.
4. Andramo ny tananao. Mazava ho azy, raha mahafeno ireo fenitra voalaza etsy ambony ny hety, dia tsy hisy olana lehibe amin'ny fahatsapan'ny tanany, fa ny kalitaon'ny hety tsirairay dia tsy azo antoka ho tonga lafatra. Tsy maninona na misy olana amin'ny kalitaony dia ilaina ny mahazo aina rehefa mampiasa azy io, satria misy fahasamihafana amin'ny endrika sy ny hatevin'ny rantsantanan'ny olona tsirairay, ary hisy fahasamihafana misimisy eo amin'ny tanan'ny olona manana hety mitovy amin'ny hety, Tianay antoka fa mahatsapa tsara izahay rehefa mampiasa azy io. Fa rehefa manandrana mahatsapa ny tànana ianao dia tsy maintsy mitandrina fa tsy maintsy manokatra sy manidy azy moramora ianao, satria haingana ny hafainganana, izay hiteraka fitetezana banga ary hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny sisin'ny hety vaovao.
5. Ny habe dia azo avahana ihany koa. Ny mpanao volo dia mazàna manomboka amin'ny 4 santimetatra ka hatramin'ny 6 santimetatra, raha ny hety biby fiompy kosa dia 7,0 santimetatra ka hatramin'ny 9.0 santimetatra. Ny ankamaroan'izy ireo dia 7.5-8.0 santimetatra, ka mizara 7 santimetatra izy ireo. Ny ankabeazan'ny nify dia tapaka amin'ny antsy manify miaraka amin'ny nify miendrika 40 V, izay mitovy fanamiana sy feno fandinihana.
Fikojakojana ny hety ho an'ny biby isan'andro
Ny hety biby fiompy matihanina dia be pitsiny kokoa noho ny hety olombelona mahazatra. Mba hiantohana sy hanitarana ny androm-piainany dia ilaina ny fikojakojana isan'andro sy marina. Raha ny marina dia tsotra ihany koa izy io. Rehefa vita ny taovolo na ny famitana ny androny, dia sasao amin'ny hoditr'osy ny hety, atsofohy menaka manosotra ao anaty elanelam-bidy eo anelanelan'ny tadin'ny hety, esory ny sarimihetsika misy menaka eo amin'ny sisiny fanapahana miaraka amin'ny penina menaka mifanentana, ary avy eo tahirizo ao anaty fitoeram-bokatra na fitaovana madio sy maina ary misy rivotra. Tandremo sao voadona ny hety. Ary mampivoatra tsikelikely io fahazarana tsara io.
Fanamarihana: ny fanesorana hety dia ny fanesorana ireo tasy amin'ny rano sy ireo akora simika hafa amin'ny sisiny mandritra ny fanapahana volo, mba tsy hanimba ny sisin'ny fanapahana. Na tsara toy inona aza ny fitaovana, dia hivoaka ny hety. Matetika ny solika dia atsindrona amin'ny elanelan'ny hety manitsy hety mba hahazoana antoka fa mihenjana ny fihenan'ny hety, raha tsy izany dia hisy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny fanitsiana ny hety, ary ny fanitsiana ny hety no fanalahidy hisy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny hety.
Rehefa avy niresaka be dia be dia azonao ve ny hety, fa ny fomba hisafidianana azy ireo
1. Safidio ny hety miaraka amin'ny tendron'ny sisin'ny fanapahana, ny savaivon'ilay valahana manindrona ary ny teboka mifandraika amin'ny tsipika mahitsy. Raha manakaiky ny loaka ny rantsan-tànana ny teboka ifandraisan'ny hety dia tsy afaka mihetsika moramora ny ankihibe, izay hanakana ny fanetezana.
2. Pet Beauty ankihiben-tànana sy rantsantanana peratra dia tokony 90 degre ary mora misokatra.
3. Mifandimby mandray ny taolana roa mba hahitana raha malefaka izy ireo.
4. Ny valahana dia tokony ho eo afovoan'ny vatana. Apetraho mitsivalana ny hety hahitanao raha mitsivalana amin'ny valahany ny visy.
5. Jereo mahitsy ny tendrony mba hahitana raha mahitsy i Jiao Bing.